ဤကမ္ဘာကို တရုတ်တို့ ကြီးစိုးသည့် အခါဝယ် – ဌေးနိုင် ဘာသာပြန် (စာညွှန်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Literature/Books » ဤကမ္ဘာကို တရုတ်တို့ ကြီးစိုးသည့် အခါဝယ် – ဌေးနိုင် ဘာသာပြန် (စာညွှန်း)
ဤကမ္ဘာကို တရုတ်တို့ ကြီးစိုးသည့် အခါဝယ် – ဌေးနိုင် ဘာသာပြန် (စာညွှန်း)
Posted by မြစပဲရိုး on Jun 3, 2015 in Literature/Books | 22 comments
Facebook ထဲ မှာ တွေ့ လို့ အမေရိကတိုက် မြောက်ပိုင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြီး ၌ မှီတင်းနေထိုင်ကြကုန်သော ရွာသူ/သား များ အတွက် မ လာပါသည်။
ဖတ်ချင်ဖတ်/ မဖတ်ချင်လဲ နေ။ လက်ခံချင်ခံ/ မခံချင်လဲ နေ။ ၂၀၁၈ ဆိုတာ သိပ်မဝေး တဲ့ အနာဂါတ်ဘဲ။
မှန် မမှန် ကြည့်ကြတာပေါ့။ lol:-)))))))))))))))))))
Credit to – Moe Soe
ဤကမ္ဘာကို တရုတ်တို့ ကြီးစိုးသည့် အခါဝယ် (အနောက်ကမ္ဘာ၏ နိဂုံး နှင့် ဂလိုဘယ်ဝါစဉ် အသစ် မွေးဖွားလာခြင်း) မာတင် ဂျိက်(စ်) ရေးသား၍ ဌေးနိုင် ဘာသာပြန်ဆို တင်ပြသည်။
ဘာသာပြန်သူက စာအုပ် ရဲ့ အဖွင့် မှာ “ဤစာအုပ် သည် တရုတ် ဆန့်ကျင်ရေး ဟောပြောချက် မဟုတ်။ တရုတ်မျှော် စာတမ်းလည်း မဟုတ်။ ဤသို့ ဖြစ်တော့မည်ဟူ၍ ခြောက်လှန့်ထားသည့် အနာဂတ္ထိကျမ်း လည်း မဟုတ်ပါ။” လို့ ဆိုပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မှာ ရောင်းအကောင်းဆုံး စာအုပ် တစ်အုပ် ဖြစ်တဲ့ ဒီစာအုပ်မှာ တနေ့တခြား စီးပွါးရေး၊ နိုင်ငံရေး နဲ့ စစ်ရေးတွေ မှာ အင်အား ကြီးမားလာနေတဲ့ တရုတ်ပြည်ဟာ ဘယ်လိုပုံနဲ့ ကမ္ဘာ့ မဟာ အင်အားကြီး နိုင်ငံ ဖြစ်လာမှာလဲ၊ ဘာကြောင့်လဲနဲ့ ဘယ်တော့လောက်မှာ ဖြစ်မှာလဲ ဆိုတာတွေကို စိတ်ဝင်စားစရာ အချက်အလက်တွေ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ နဲ့ သုံးသပ် တင်ပြထားပါတယ်။ ဘာသာပြန်သူ ကလဲ မူရင်း အာဘော်ကို မပျောက်စေပဲ မြန်မာတွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား စီးပွါးရေး၊ နိုင်ငံရေး ဝေါဟာရတွေ ကို အသုံးပြုထားတာ ကြောင့် ရှားရှားပါးပါး ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ နိုင်ငံရေးစာအုပ် တစ်အုပ်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တနေ့တခြား ခေတ်မီ တိုးတက် လာနေ တဲ့ တရုတ်ပြည် ရဲ့တိုးတက်ပုံဟာ အနောက်တိုင်း နိုင်ငံတွေ ရဲ့ ခေတ်မီပုံ နဲ့တော့ တူမှာ မဟုတ်ဘူး လို့ ဆိုပါ တယ်။ နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော် သမိုင်း ရှိတဲ့ တရုတ်ပြည် ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ တမူ ကွဲပြားတဲ့ ဘဝကို ရှုမြင်နည်း၊ မိသားစုနဲ့ အိမ်ထောင်ရေး အမြင်တွေ ပြီးတော့ တရုတ်ပြည်သာ စကြာဝဠာ၏ ဗဟိုချက် (Middle Kingdom) ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက် တွေကြောင့် ခေတ်မီပုံ မှာလဲ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု ပုံစံအတိုင်းသာ ဖြစ်လိမ့်မယ် လို့ ဟောကိန်းထုတ် ထားပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာလဲကောင်း စိုးရိမ်စရာလဲကောင်း တာကတော့ တရုတ်လူမျိုးကြီးဝါဒ (ဟန်လူမျိုးကြီးဝါဒ) အပေါ် သုံးသပ် ဟောကိန်းထုတ်ချက် ပါပဲ။ တရုတ်လူမျိုး များစွာရဲ့ စိတ်ထဲမှာ တရုတ်ပြည်ရဲ့ အစဉ်အလာ ဟာ အာရှ ဒေသအတွင်းမှာ ပြိုင်ဘက်ကင်းပြီး တနေ့မှာ မူလ ထိပ်ဆုံးအဆင့်ကို ပြန်ရောက်မယ်လို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ယုံကြည် ထားကြပါသတဲ့။ မျက်မှောက် ခေတ်မှာ အိမ်နီးချင်း အာရှ နိုင်ငံ တွေကို လက်ဝေခံ အဖြစ် ဆက်ဆံခြင်းက ဒီ အတွေးအခေါ် အသက်ဝင်ဆဲ ဆိုတာကို ပြနေတယ်လို့လဲ ဆိုပါတယ်။ မဟာ အင်အားကြီး တရုတ်ပြည်ဟာ ဘယ်အတိုင်း အတာ အထိ ဟန်လူမျိုးကြီးဝါဒ ကို ကိုင်စွဲမလဲ ဆိုတာကတော့ အဖြေမရှိသေးတဲ့ မေးခွန်း တစ်ပုဒ်ပါ တဲ့။
တရုတ်ပြည်ရဲ့ ခေတ်မီတိုးတက် လာပုံတွေကို တင်ပြရင်း အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ အင်အား ကျဆင်းလာပုံ ကိုလဲ ဆက်စပ် သုံးသပ်ထားပါတယ်။ တရုတ် တပ်မတော်က ခေတ်မီရေး အားထုတ်လာ နေတာကြောင့် တရုတ်နဲ့ အမေရိကန် စစ်အေး တိုက်ပွဲများ ဖြစ်မှာလားလို့ စိုးရိမ်စရာလဲ ရှိပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန် တို့က တရုတ် ရဲ့ စီးပွါးရေး ခြိမ်းခြောက် မှုကို လျစ်လျူရှုပြီး စစ်ရေး ခြိမ်းခြောက်မှုကို သာ အာရုံစိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ အမေရိကန် တို့ရဲ့ ကျဆုံးခန်း ဟာ ပိုပြီး မြန် ပါလိမ့်မယ် လို့လဲဆိုပါတယ်။
မဟာအင်အားကြီး တရုတ်ပြည်ဟာ လက်ရှိ နိုင်ငံတကာစနစ် နဲ့ စင်ပြိုင် စနစ်တခု ထူထောင်ပါလိမ့်မယ် လို့ ဟောကိန်းထုတ်ပါတယ်။ အဲဒီ စင်ပြိုင်စနစ်ကြောင့် တရုတ် နဲ့ အမေရိကန် ပဋိပက္ခ တွေ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ် တဲ့။ အရှေ့အာရှ နဲ့ အာဖရိက ဟာ တရုတ် ဩဇာ ရပ်ဝန်း ရယ်လို့ ဖြစ်လာနိုင်ပြီး ဥရောပ နဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ကတော့ အမေရိကန် ရဲ့ ဩဇာရပ်ဝန်း ဖြစ်မယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
ထူးထူးခြားခြား မှတ်သားစရာ ကတော့ တရုတ်ပြည် ဆိုတာဟာ အနောက်တိုင်းပုံစံ တိုင်းပြည် နိုင်ငံ (Nation State) မဟုတ်ပဲ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု အပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနိုင်ငံ (Civilisation State) ဖြစ်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဒါကြောင့်လဲ တရုတ်ပြည် ကို ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ အနောက်တိုင်း အတွေးအခေါ် တွေနဲ့ တိုင်းလို့ မရ၊ နားလည်အောင် ကြိုးစားလို့လဲ မရပါဘူး တဲ့။ မဟာအင်အားကြီး တရုတ်ပြည် ဖြစ်လာတဲ့ အခါမှာလဲ အရင်က အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ကိုလိုနီစနစ်မျိုး အစား အခြား နိုင်ငံတွေကို ဩဇာခံအဖြစ် သိမ်းသွင်း တဲ့ ပဏ္ဏာဆက် နိုင်ငံ စနစ် (Tributary System) ကို ကျင့်သုံး လိမ့်မယ် လို့လဲ ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိ အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေထက် တရုတ်ပြည် က အသာစီး ရထားတဲ့ အချက်ကတော့ လူဦးရေပါဘဲ တဲ့။ တရုတ် လူမျိုးတွေဟာ ကမ္ဘာ အရပ်ရပ် ကို အလုံး အရင်း နဲ့ ရွှေ့ပြောင်း နေကြတယ် လို့လဲ ဆိုပါတယ်။ ဥရောပ၊ အမေရိက၊ ရုရှား နဲ့ နှစ်ဆယ့်တစ် ရာစု အစောပိုင်းမှာ အာဖရိက ပါမကျန် တရုတ် လူမျိုးတွေ ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ် ပြန့်နှံ့ နေ ပါသတဲ့။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တရုတ်ဘာသာစကား အရေးပါလာပြီး တရုတ်လူမျိုးတွေမှာ အရိုးစွဲ နေတဲ့ တရုတ်လူမျိုးကြီးဝါဒ ပြန်လည် အသက် ဝင်လာနိုင်ပါတယ် တဲ့။ မဟာအင်အားကြီး တရုတ်ပြည် ဖြစ်လာတဲ့ အခါမှာတော့ လူမျိုးရေး နဲ့ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု ကို အခြေပြုပြီး ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံ တွေ ကို အဆင့်အတန်း ခွဲခြား ဆက်ဆံ မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အနောက်တိုင်းသား လေ့လာသူများ ကတော့ တရုတ်ပြည် တိုးတက်လာခြင်း ကို အမြင်နှစ်မျိုး ထဲနဲ့သာ ရှုမြင်ပါတယ် တဲ့။ ပထမ အမြင်ကတော့ တရုတ်ပြည်ဟာ စီးပွါးရေး တိုးတက်လာပြီး အနောက်တိုင်း ဆန်လာလိမ့်မယ်လို့ မြင်ပါ သတဲ့။ ဒုတိယ အမြင်ကတော့ တိုးတက်လာတဲ့ တရုတ်ပြည် ဟာ ကျရှုံးမှုနဲ့သာ အဆုံးသတ် ရမှာပါတဲ့။ ဒီအမြင်တွေ ဟာ တရုတ်ပြည် ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဝိသေသ လက္ခဏာတွေ ကို လျစ်လျူရှု ထားလို့ မှားယွင်းပါသတဲ့။ တရုတ်ပြည်ကို အနောက် နိုင်ငံတွေရဲ့ ပေတံ နဲ့ တိုင်းလို့ မရဘူး လို့လဲ ဆိုပြန်ပါတယ်။
နောက် သာဓက တစ်ခု အနေနဲ့ တင်ပြထားတာ ကတော့ အနောက်နိုင်ငံ တွေက တရုတ်ပြည်မှာ အနောက်တိုင်း ပုံစံ ဒီမိုကရေစီ မရှိဘူး လို့ ဝေဖန် နေကြတဲ့ အချိန်မှာ တရုတ်ပြည်သူ ၉၅.၉ ရာခိုင်နှုံး က စာညွန်းဗဟို အစိုးရကို ထောက်ခံ ကြပါသတဲ့။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာ ရေး အကျပ်အတည်း က အနောက်တိုင်း စီးပွါးရေး စနစ်ရဲ့ အားနည်းချက် နဲ့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ စီးပွါးရေး အင်အား ကြီးမားမှုရဲ့ သာဓကလဲ ဖြစ်ပါသတဲ့။ လက်ရှိ အခြေအနေမှာ တရုတ်ပြည် ဟာ နိုင်ငံပေါင်းများစွာရဲ့ အဓိက ကုန်သွယ်ဘက် ဖြစ် နေပြီး တရုတ် ရင်မင်ဘီ ဟာ ကမ္ဘာ့ ဒုတိယ ကုန်သွယ်မှု ငွေကြေး ဖြစ်လာနေပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိ မဟာအင်အားကြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ ကတော့ သူတို့ရဲ့ ဩဇာအာဏာ ကျဆုံး ချိန်နဲ့ အလွန် နီးကပ်နေပြီ ဆိုတာကို လက်မခံ နိုင်ကြသေးပါဘူးတဲ့။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဟာ ကမ္ဘာ့ ယဉ်ကျေးမှု ကို ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်၊ အားကစား တွေနဲ့ ဦးဆောင်သလို တရုတ်ပြည်က တရုတ် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ တွေ၊ တရုတ် ကိုယ်ခံပညာရှင် တွေ၊ တရုတ် သတင်းဌာန တွေ၊ တရုတ် အားကစားသမား တွေ အောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ် လို့လဲ ဆိုပါတယ်။
တရုတ်စီးပွါးရေး ရဲ့ ပမာဏဟာ ဘယ်အချိန်မှာ အမေရိကန် ကို ကျော်တက်သွားမလဲ ဆိုတာကို အနောက်နိုင်ငံ က ငွေကြေး ကုမ္ပဏီ ကြီးတွေက ဟောကိန်း ထုတ် ကြပါသတဲ့။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် က ထုတ်ခဲ့တဲ့ ဟောကိန်း မှာ တော့ ၂၀၂၇ မှာကျော် တက် မယ် လို့ဆို ပေမဲ့ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဟောကိန်း မှာတော့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် လို့ ရှေ့ ကိုတိုး လာပါသတဲ့။ ဒါပေမဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မှာ တော့ The Economist စာစောင်ကြီး က ၂၀၁၈ ဆိုရင် တရုတ် က ကျော်တက် ပြီလို့ ဆိုပါသတဲ့။
ဒီလို အရှိန်အဟုန် နဲ့ တိုးတက်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့် တရုတ်ပြည် မဟာစီးပွါးရေး အင်အားကြီးနိုင်ငံ ဖြစ်လာခြင်း ကို အမေရိကန်တွေ ဘယ်လိုမှ ဟန့်တားလို့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ အမေရိကန် တို့ရဲ့ ကျဆုံး ခန်း ဟာ ထင်တာထက်တောင်မှ ပိုပြီး မြန်နိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် တရုတ်ပြည်က ကမ္ဘာကြီး ကို ကြီးစိုး တဲ့ အနာဂတ် ဟာ ရှောင်လွှဲလို့ မရနိုင်တော့ဘူးလို့ ကောက်ချက်ဆွဲပြီး စာအုပ်ကို နိဂုံး ချုပ်ထားပါတယ်။
အဲဒီလို အကွက်စိပ်စိပ် နဲ့ စနစ်တကျ သုံးသပ် တင်ပြထားတဲ့ မာတင် ဂျိက်(စ်) ရဲ့ စာအုပ်ဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာ ရောင်းအကောင်းဆုံး စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်သွားပြီး ဒုတိယ အကြိမ် တည်းဖြတ်ထုတ်ဝေတဲ့ စာအုပ်တောင် ထွက်နေပါပြီ။ သူ့ရဲ့ အဓိက တင်ပြချက်ဖြစ်တဲ့ တရုတ်ပြည် ဟာ တိုင်းပြည်နိုင်ငံ (Nation State) မဟုတ်ပဲ ယဉ်ကျေးမှုနိုင်ငံ (Civilisation State) ဖြစ်တယ် ဆိုတာကိုပဲ ဝေဖန်ကြ ဆွေးနွေးကြတာ တွေဟာ မနည်းပါဘူး။
သာမန် အရပ်သား စာဖတ်သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ ဒီစာအုပ်ပါ တင်ပြချက်တွေ ထဲက တချို့ အချက်တွေကို သဘောမတူ၊ သဘောမကျ သော်လဲ တွေးစရာ၊ ဆင်ခြင် စဉ်းစားစရာ တွေ ပေးနိုင်လို့ ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် လို့ညွန်းပါရစေ။ ဒီ စာအုပ်ကို လက်စွမ်းပြ ဘာသာပြန်သူ စာရေးဆရာ ဌေးနိုင် ကိုတော့ ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ဖြစ်သွားတဲ့ အတွက် အထူး ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း နဲ့ နောင်ကို လဲ ဒီလို စာအုပ်ကောင်းတွေကို ဘာသာပြန် ပေးပါဦးလို့လဲ မေတ္တာရပ်ခံ လိုက်ပါ တယ်။
ခလားး တေ ကော..
ကြီးးစိုးး ဖို့ ကြံတာကို ငြိမ်နေဂျဘဲ
မြန်မာကိုလည်းး ကဘာမှာ ကြီးးစိုးး နိုင်ဖို့
လုံလောက်တဲ့ လူဥရေ ရဖို့
ကလေးး များးများး ဖစ်တဲ့ နည်းး နဲ့ မွေးးဂျ..!!
အဲလို ဆန်ဆန် ဘူ လာပေါမယ် လို့ ထင်ရဲ???
( မန်မာကိုလည်းး ကဘာမှာ ကြီးးစိုးး နိုင်ဖို့
အဲလို ဆန်ဆန် ဘူ လာပေါမယ် လို့ ထင်ရဲ??? )
နောက်တနည်းကတော့.. ကမ္ဘာ့လူဦးရေအများဆုံး ၂နိုင်ငံကို ဆွဲစေ့အမျိုးစပ်နည်းပဲဗျ…။
နှစ်၃၀၀၀ကျော်ယဉ်ကျေးမှု၂နိုင်ငံကြီးကြားက.. နှစ်၁၀၀၀ကျော်ယဉ်ကျေးမှုရှိတဲ့.. စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်ဆံနေတဲ့.. မြန်မာပြည်.. မြန်မာမျိုးနွယ်ဆိုတာ…
အဲဒီ ၂နိုင်ငံသား.. အဖြူ/အ၀ါ နဲ့.. အမဲ/အညိုလူမျိုးတွေညားပြီးထွက်လာတဲ့.. လူမျိုးတွေဖြစ်ဖို့.. ရာခိုင်နှုန်း၉၀မကရှိသဗျ…။
မယုံသူတွေ.. ဒီအန်အေ..မျိုးရိုးဗီဇ စစ်ကြည့်ကြ…
ဟုတ်နေရင်.. အမျိုးတွေဆီက.. အခွင့်အရေးတွေအရယူကြ..
ဘိရုမာ လူအူးရေ နည်းတာအမှန်…
ဘာတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှမှာ အင်မတန်ထွားတဲ့ တိုင်းပြည်တဲ့….
သဂျီးတို့ အရီးတို့ … မျိုးဆက်သစ် မြန်မြန်မွေးဂျဗျာ….
အစိုးရတို့ အတိုက်အခံတို့ လာမပြောနဲ့ … ခီညားတို့က ပစ်ကွင်းလွတ်တဲ့ဒေသမှာ..
နောက်တချက်ခရိုနီတို့ အဘေ-ာမတို့ လာမပင့်နဲ့… အဲ့ဒါတွေလည်း ခီညားတို့နဲ့ မဆိုင်…
1+1=1 လားဗျ… ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း ပေါင်းဖက်လက်ထပ်ပြီး… အဖနိုင်ငံတော်အတွက် တယောက်စာသာ
တာဝန်ကျေမယ်ဆိုတာ အင်မတန် အားနာဖို့ကောင်းတယ်မဟုတ်လား…
လက်နှက်ကိုင်ဖို့လည်းမလို တောခိုဖို့လည်းမလို … လမ်းပေါ်ထွက်ဖို့လည်းမလို…
လိုတာ …တခုပဲ… ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့မျိုးချစ်လို့ရပါတယ်….
အမေရိကမှာနေတဲ့ 1+1=1 က.. (အခြေခံဥပဒေအရ)အမေရိကန်လေး..အလိုအလျှောက်ပဲဖြစ်မှာဗျ..။
မြန်မာဖြစ်ချင်ရင်.. အခြေခံဥပဒေအရင်ပြင်မှဖြစ်မယ်..။ Dual Citizen ခွင့်ပြုမှလေ..။
အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံ မှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံသား ဖြစ်တာ နဲနဲ ရှုပ်တယ်။
၁၉၈၃ မတိုင်ခင်က အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံ မှာ မွေးတာ နဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံသား တန်းဖြစ်တယ်။
အဲဒီ နောက်ပိုင်း မိဘ နှစ်ယောက်ထဲ က တစ်ယောက်ယောက် က စီတီဇင် ဖြစ်မှ ရတယ်။
ဒီနေ့ ခေတ် သွေးနှောတာ ပိုပြီး ဉာဏ်ကောင်း တဲ့ ကလေး တွေ ရသတဲ့။
တိုင်းပြည် ကို ဘဲ ချစ်ပါတယ်။ မျိုးတော့ မချစ်တော့ဘူး။
အမုန်းတွေ ငါတွေ စွဲ နေတာကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းတိုင်း ကို boycott လုပ်ပါသည်။
ကိုင်း ပေါက်ဖော်တို့စွမ်းအားကို ဂဘာက သိပေတော့မည်…
တရုတ်ဆိုတာ.. မြန်မာဘာသာဗေဒအရကောက်ပြောရရင်… သူပုန်.. သကန်.. ကိုခေါ်တာမို့.. ဒီပြောဆိုချက်ဟာ.. ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..။
တရုတ်ပြေးမင်းဆိုတာ.. မွန်ဂိုဧကရာဇ် ကူဗလိုင်ခံတပ်တွေဝင်တိုက်လို့.. ပြေးရတဲ့နရသီဟပတေ့မင်းကိုခေါ်တာပါ..။
မွန်ဂိုတွေဟာ..အဲဒီတချိန်ထဲမှာပဲ.. စိန့်ပြည်ကိုဝင်တိုက်ပြီး.. သိမ်းခဲ့ကြပါတယ်..။
အဲ…ဆိုးတာက.. ကိုယ်တိုင်မရေးဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်တာမို့.. ဘာသာပြန်ချက်ဆိုရင်တော့.. တိုင်းပြည်နာမယ်နဲ့တင်…လွဲနေပြီပြောချင်တာပါပဲ..။
ကြားထဲ.. United States ကို.. အမေရိကန်နိုင်ငံလို့ပြန်ထားသမို့.. ဘာသာပြန်သူအရည်အချင်း.. အထင်မကြီးကြောင်းပြောပြီး… မူရင်းစာအုပ်ကိုတော့..ဖတ်ကြည့်ချင်မိရဲ့…
– 2015 estimate 320,925,485 (3rd)
– Density 35/km2 (180th)
– Total $17.418 trillion (1st)
– Per capita $54,596 (10th)
– 2013 estimate 1,357,380,000 (1st)
– 2010 census 1,339,724,852 (1st)
– Density 2013 : 145/km2 (83rd)
– Total $11.212 trillion (2nd)
– Per capita $8,154 (75th)
.အာ သဂျီးရာ အဲအခေါ်အဝေါ်ကိစ္စက မလွယ်ဘူး။ ဂျာနယ်တွေမှာလည်း ဒီလိုပဲ သုံးတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဒါမှမဟုတ် အမေရိကန်နိုင်ငံ ဒီလိုပဲ ရေးကြတာ။ အမေရိကလို့ မရေးကြဘူး။ ကျမကတော့ အခု ပြန်နေတဲ့တစ်အုပ်ကို လူကလည်း ရူးချင်ချင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ အမေရိကား လို့ ပြန်ထားတယ်။ စာပြောထဲမှာဆိုရင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု။ စကားပြောထဲမှာဆိုရင် ဘယ်သူမှ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု လို့ မခေါ်ကြတော့ အမေရိကား။ အဲလို နှစ်မျိုး သုံးရတာပေါ့။ မြန်မာစာက စာပြော၊ကကားပြော ၂မျိုးဖြစ်နေတာရှိတယ်
တရုတ်က အကြီးအကျယ် သူ့ စူပါ ပါဝါကိုချဲ့နေလို့…
“ပုခုံးချင်း မယှဉ်ဖို့” အိုဘားမားက သတိပေးသဗျ…
ဆိုတော့… အန်ကယ်ဆမ်က ဒီအတိုင်း လွှတ်ပေးမယ်မထင်…
ပွဲကတော့ ကြည့်ကောင်းဦးမယ်ထင်ရဲ့… ဗေထိ ဗေထိ
ယူအက်စ်ဆီမှာ.. ချိုင်းနားအကြွေး… ၁.၃ထရီလီယန်လောက်ရှိနေတယ်…။
ယူအက်စ်က..(အကြွေးတွေပြန်မဆပ်ချင်သမို့) ပြသနာရှာပြီး.. စစ်တိုက်ချင်နေပေမယ့်.. ချိုင်းနားကတော့..
တကယ်ထိပ်တိုက်ဆိုရင်.. (ကြွေးဆုံးမှာမို့) ရှောင်ပေးမယ်ထင်..။
တကယ့်အရင်းအမြစ်စိတ်မှာတော့.. ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားကိုယ်စီကြည့်ပြီး.. ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတွေကိုပေါင်းစားကြမယ်လို့သာ… ထင်..။
ကိုယ် နဲ့ စိတ်မတူတာ နဲ့ သူများ ကို အထင်သေးတတ်ခြင်းဟာလဲ ရောဂါ တစ်မျိုးဘဲ ထင်ပါရဲ့။
ဒီလိုပြော ရင် ဒီလို လာ မယ် သိသားဘဲ။
အဲလို ရောဂါရှိကြောင်း သိရင် ကုနိုင်အောင် ဆွပေးလိုက်တာပါ။
အနာပေါ် တုတ်နဲ့ ထိုးသလို ဖြစ်မိရင်တော့ စောဒီး။
amazon.com မှာ ဝယ်ရင် ပို့ခဘဲ ရှိတာမို့ ဝယ်ဖတ်ပါသူကြီး။
မဝေးတော့ တဲ့ ကာလထဲ လောင်းကြေးထပ်ချင် ထပ်နိုင်သပေါ့။
ဒါထက် တရုတ် ကို မြန်မာလို ဘယ်လို ခေါ်တယ် ထင်လို့လဲ။
ဝေဖန် ခြင်းနောက်မှာ ဖြစ်သင့်တာ ကို ပါ ထည့်ပြောမှ အပြုသဘာဆောင်တယ် သူကြီးရဲ့။
အဘတို့အဘ လို့ ခေါ်ချင်လို့လား။ lol:-)))
အမေရိကပြည်ကို.. စိန့်ပြည်က… နောင်၂၀နှစ်ထဲ..ဘယ်လိုမှမကျော်နိုင်…
လောင်းရဲပါတယ်..။ အပေါ်မှာ ဂျီဒီပီနဲ့..၀င်ငွေလည်းပြထားတယ်..။
စိန့်ပြည်က.. စိန့်တိုင်းသားတွေ… ယူအက်စ်လာပြီး.. သိန်းသန်းချီပေး..မြေ၀ယ်အိမ်ဝယ်လာအခြေချနေကြတာပဲ..
ကွန်မြူနစ်လက်အောက်မှာ.. တိမ်တောင်သဖွယ်မင်းရေးကျယ်.. ဆိုတာ… စိန့်တိုင်းသားသူဌေးတွေကောင်းကောင်းသိ…။
စိန့်ပြည်ရဲ့အတော်ဆုံး..အချမ်းသာဆုံးတွေကို.. အမေရိကပြည်ကဆွဲယူလိုက်ပြီး.. အမေရိကန်အဖြစ်ပြောင်းလိုက်လို့.. တိုင်းပြည်ရဲ့မောင်းနှင်အားအဖြစ်ပြောင်းလိုက်ကြမှာပါ..။
နောင်အနှစ်၅၀အတွင်းတောင်.. အာရှသားတယောက်ယောက်က.. အမေရိကသမ္မတတောင်ဖြစ်ချင်ဖြစ်လာနိုင်…။
China ကို. စိန့်ပြည်… ဒါမှမဟုတ်..ဂန္ဓလရာဇ်တိုင်းလို့.. မြန်မာမင်းအဆက်ဆက်ခေါ်ခဲ့ကြတယ်..။
တရုတ်စကားအစဖြစ်တဲ့.. မှတ်တမ်းကျန်ရစ်တဲ့.. နရသီဟပတေ့မင်းကို…
မွန်ဂို..တာတာတပ်တွေဟာ.. ဂျင်ဂစ်ခန်နဲ့..ကူဗလိုင်ခန်လက်ထက်.. ကမ္ဘာတလွှားအင်ပါယာချဲ့တာမှာ..
ကူဗလိုင်ခန်လက်ထက်မှာ.. မြန်မာပြည်ထဲဝင်သမို့.. ပုဂံကျခဲ့တယ်..။
မြန်မာတွေဟာ.. စကားကြွယ်တယ်..ကြွယ်တယ်နဲ့.. သူတပါးတိုင်းပြည်/လူမျိုးအမည်တွေအမှားမှားအယွင်းယွင်းခေါ်ခဲ့ကြတာ.. နှစ်မနည်းတော့ဘူး..
China = sino = စိန့်.. ဖြစ်တာပါပဲ..။
Sino generally refers to China, the ancient-to-modern history of China, the culture of China, or the Chinese people. It may also refer to: Sino (Café Tacuba ..
အဲဒီ စိန့်တိုင်းပြည် ဆိုတဲ့ အသုံး တော့ အခု သုံးသင့်/မသင့် ဆန်ဒါခံယူသင့်ပါတယ်။
တော်ကြာ ကျွန်မတို့ ဦးသိန်းစိန် ရဲ့ တိုင်းပြည် ဖြစ်သွားတယ် လို့ ထင်နေကြမှဖြင့်။
အဲဒီလိုခေါ်တော့ မှ အဲဒီ စိန့်ပြည် နဲ့ ဒီက စိန်ရဲ့ပြည် ဇယားတွေ ရှုပ်ပြီး တကယ် စစ်ဖြစ်တော့မှာ။ :roll
ဝင်ပြီး ဖတ်ကာ အမြင်လေးများ မျှပေးသွားတဲ့ ဇီကလေး၊ ကိုမျိုး၊ ဆက်ဆက်၊ သူကြီးမင်း၊ ပါပါ ကျောက်စ် နဲ့ မောင်အောင် တို့ကို ကျေးဇူးပါ။
အဲဒီ စာအုပ်က ၂၀၁၂ အောက်တိုဘာက ထွက်တာ အတော်ကြာပြီမို့ ဆိုင်တွေပေါ် ရှိမရှိတော့ မသိ။
ဘာသာပြန် စာရေးသူ က မူရင်းစာရေးသူ နဲ့ လူချင်းခင်မင် ပြီး လက်ရှိမှာ အလုပ် အတူတူ တွဲ လုပ် နေတယ်လို့ တော့ သိရပါတယ်။
.သဂျီးပြောသလို တရုတ်( စိန့်တိုင်းသားတွေ…)တွေ နိုင်ငံအနှံ့ အခြေချနေကြတာ
.မြန်တျန့် တောင် စိန့်တိုင်းပြည်ဖြစ်လုလု
မြန်မာတို့ရဲ့.. နှစ်၁၀၀၀ ယဉ်ကျေးမှုမှာ.. စိန့်ပြည်.. ကုလားပြည်..အပြန်အလှန်ကူးလူးဆက်ဆံတဲ့..လမ်းကြောင်းပေါ်က.. မြို့တော်က.. ပုဂံမင်းနေပြည်ပါပါတယ်.။ ဆစ်ခ်ရုတ်(ပိုးလမ်းမ)ကြီးပြီးရင်.. ဒုတိယ ကုန်သွယ်လမ်းမကြီးပေါ်ကျနေလောက်ပါတယ်..။
အဲဒီပုဂံပြည်.. ပုထိုးကြီးတွေဆောက်.. မုဆိုးမဘုရားတည်… ခန့်ညားထယ်ဝါနေနိုင်တာ.. ကုန်သွယ်လမ်းပေါ်ကျနေလို့ပါ..။
နှစ်၁၀၀၀ အပြန်အလှန်ကူးလူးဆက်ဆံနေတာတောင်… စိန့်တိုင်းသားတွေ မြန်မာပြည်အနှံ့မမြင်ရတာ… အခုမှထမြင်ရမယ်ဆိုတာမဟုတ်သေး…။
ထပ်ပြောချင်တာက… စိန့်ပြည်သားတွေကို တရုတ်လို့ခေါ်နေရင်..မြန်မာပြည်ထဲက.. မြန်မာပြည်ပေါက်.. တိုင်းရင်းသားတချို့ကို.. တရုတ်လို့မခေါ်သင့်…
အဲဒီချိပ်ဆက်ထားမှုဟာ.. အခုလို စိန့်ပြည်က..စူပါပါဝါတက်လှမ်းလာချိန်မယ်.. ပြဿနာအကြီးအကျယ်တက်မယ့်လမ်းကို.. ရွေးလျှောက်နေတာလို့.. ဆိုချင်မိတယ်..။
တခုခုကို ရွေးစေလိုမိတယ်…။ ဘင်္ဂလီနဲ့.. ရိုဟင်ဂျာလိုလမ်း.. ကုလားနဲ့..ကုလားပြည်လိုလမ်းမရွေးစေလိုပါဘူး..။
တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့ဆိုတာ… အဲဒီနေတိုင်းသူပြည်သားတိုင်းအသိစိတ်ဓာတ်ကိုယ်စီနဲ့.. အမြင်ကျယ်ကြမှဖြစ်တာပါ..။
နှစ်၃၀၀၀ကျော်ယဉ်ကျေးမှုနိုင်ငံကြီး၂ခုကြား.. လူဦးရေသန်းထောင်ချီကြားက.. မြန်မာပြည်နဲ့မြန်မာလူမျိုးဆိုတာ…. သူတို့၂မျိုးသွေးရောပြီးဖြစ်လာတဲ့လူမျိုးလို့…ဆိုချင်…။
ဆင်းရဲတုံးက…အေးအတူပူအမျှ ပြသနာတွေရင်စီးခံလာကြပြီးမှ.. သူတို့ချမ်းသာချိန်…ကိုယ်က..ဘာလို့ကန်ထုတ်နေမလည်း..
သူဌေးနဲ့ပေါင်းကြ..။ စီးပွားလုပ်ကြ…။ ဆွေမျိုးပေါက်ဖေါ်လုပ်ကြ..။
ဆိုရှယ်လစ် ခေတ်ကာလ အပိုင်းအခြားတစ်ခုမှာ
ကိုးကန့် တို့ ၀ တို့ ဆို တာ မြန်မာပြည်က လက်မခံခဲ့တဲ့ နာမယ်တွေပါ
ဒါကြောင့် ရှမ်းတရုတ် ဆိုတဲ့ အမည်ခံပြီး နေခဲ့ကြတာပါ
ဟိုးအရင် မော်စီတုန်းလက်ထက် နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲမှာ
တရုတ်ပြည်က နေ အတော်များများထွက်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။
တရုပ်လူမျုိးတွေက အဲဒီအချိန်က တရုပ်ပြည်ကနေ ဖြစ်သလိုထွက်ပြေးလာခဲ့ကြသူတွေပါဘဲ။
ဒါကြောင့်လဲ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားက မြို့အတော်များများမှာ “တရုပ်တန်း”ဆိုပြီး
သူုတို့က ရောက်လေရာမှာ တသားတည်းဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အဓိကအချက်ကတော့
ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မူ့မှာ ပြင်းထန်သောအယူအဆမရှိခြင်းကြောင့်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်။
အလုပ်ကို ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်ကိုင်ကြလို့ဆိုတာကလဲအမှန်ပါဘဲ.
ဒါကတော့ ကျနော် ထင်မြင်ချက်လေးပါဘဲ
အခုပြထားတဲ့စာအုပ်ကိုတော့ မဖတ်ဘူး ပါဘူး
By Sarah Svoboda BBC News
There are more thanaquarter ofamillion students from China in colleges in the United States –
a third of all international students in the country – and almostafivefold increase since 2000.
Why do so many now come to study in the US?